China N'ogbe Piel Glass Mkpa Oil Square karama factory na suppliers | Jiamei
N'ogbe Piel Glass Mkpa Oil Square karama
Agba ： Piel
Ike: 15ml, 25ml, 35ml, 50ml, 100ml
Ngwa: Zuru oke maka itinye mmanụ dị iche iche, dịka mmanụ dị mkpa, mmanụ ihe oriri, isi, senti, mmanụ ịhịa aka n'ahụ wdg.
Ihe ： Glass
Kwụ ụgwọ: T / T
Aha ngwaahịa Square dị mkpa karama mmanụ
Ike 10ml, 25ml, 35ml, 50ml, 100ml
Dị Ihe nlele
Ojiji Karama mmanụ dị mkpa
Ọrụ silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ na Filiks
A na-ewu ewu na karama mmanụ a nụchara anụcha na ọha na eze n'ihi ọdịdị ya pụrụ iche. Ọ dị iche na cylinder ọdịnala ma nwee ọdịdị pụrụ iche. E jiri ya tụnyere ọdịdị nke cylindrical, ọdịdị nke okpukpu mmanụ nke karama mmanụ na-ele anya karịa akụkụ, anaghị eme ka ike gwụ ọha na eze. Ma ọ ka bụ ụdị karama mmanụ dị mkpa. nwere ike ịchekwa mmanụ dị mkpa, ihe na-esi isi ụtọ, mmanụ ịhịa aka n'ahụ na mmiri ndị ọzọ .Ọ na-echekwa mmanụ gị dị mkpa, ka mmanụ a likeụ dị ka mmanụ tangerine ghara imetụta ha. Ikike ị nwere ike inye nnukwu onyinye iji kpuchido gburugburu ebe obibi.
Agba ya bụ uzo ma nwee ike igosipụta ìhè anyanwụ, ya mere ọ mara mma. Nkọwapụta nke karama mmanụ dị mkpa bụ 15ml, 25ml, 35ml, 50ml na 100ml.This imewe a na-enye gị ọtụtụ nhọrọ maka ndị na - eri ya, kamakwa maka gị Ndụ iji gbakwunye ọtụtụ mma ma belata ụdị nsogbu dị iche iche. sizesfọdụ nha dabara adaba maka obere, dabara adaba na obere akpa gị, ụfọdụ dabara maka ojiji ụlọ, yana nkọwa dị iche iche maka nhọrọ gị.
Anyị nwere ihuenyo silk, stamping na-ekpo ọkụ, ntu oyi, akara, agba agba na usoro ndị ọzọ, yabụ anyị nwere ike ịhazi akara ngosi dị iche iche na usoro ịchọrọ.We nwere ike ịhazi otu Logo maka gị dịka eserese izizi ị nyere. karama mmanụ dị mma nwere ụdị dịgasị iche iche, ọrụ zuru oke, ị nwere ike ịhọrọ mkpuchi dịka mkpa gị.Ọ bụ eziokwu, ngwaahịa anyị dị mma, ị nwere ike ijide n'aka na a gaghị agbapụta mmiri mmiri.
Ihe ị chọrọ nwere ike ịkpọtụrụ ọrụ ndị ahịa, anyị ga-eji obi gị niile jeere gị ozi.
Nke gara aga: egwurugwu acha dị mkpa mmanụ ala karama 5ml oké iko ala kalama na aluminum mkpuchi
Osote: N'ogbe Green Amber Glass Mkpa Oil ala Bottle